‘एमाले मिलिसक्यो, लडौं भन्न चाहनेलाई पनि अब विवादको बिषय छैन’ (भिडियो) – Nepal Press
‘एमाले मिलिसक्यो, लडौं भन्न चाहनेलाई पनि अब विवादको बिषय छैन’ (भिडियो)
२०७८ साउन १० गते २०:०४
अघि सुवास कमरेड (सुवास नेम्वाङ) ले भनेजस्तै हामीले पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता दुवैजनालाई यो सहमति गर्ने आरम्भ चरणदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराएका छौँ । उहाँहरूलाई सो कुराको जानकारी गराउनुको साथ साथै सहमति गर्नु पूर्व अन्तिम बिन्दुमा जानकारी गराएका छौँ ।
अलिकति तितो नलागोस्, पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको ठाउँबाट होस वा हाम्रा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको ठाउँबाट होस्, हाम्रो विधानसँग नमिल्ने, हाम्रो पार्टीको एकतासँग नमिल्ने ती सबै कुराहरू बदर हुनेछन् भनेर त हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ । यो भन्दा ठूलो एकताका लागि घोषणा अरू के हुन सक्दछ ? यो भन्दा फराकिलो कुरा अरू के हुन सक्दछ ?
यसलाई कमरेडहरुले अवश्य पनि निकै महत्वकासाथ आत्मसाथ गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसका साथसाथै अदालत या विश्वासको मतका सन्दर्भमा म प्रवेश नै गर्न चहान्न् ।
अघि सुवास नेम्वाङले भने जस्तै त्यो त चरण नै सकिसक्यो । तर, यसभन्दा पछि हाम्रो राष्ट्रिय महधिवेशनको प्रसंग छ । कमरेडहरुको मनमा पनि त्यो हुनसक्छ-कसरी हुन्छ ? विभिन्न तहका अधिवशेनका कुरा छन् । सदस्यता नवीकरणको कुरा छ । कतिपय कमरेडहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने कुरा छ । ती कुराहरुका बारेमा हामीले यो सहमतिमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छौं ।
जब हामी एउटै गन्तव्यतर्फ पाइला चाल्छौं, एउटै उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्छौं, त्यतिबेला यी महाधिवेशन, अधिवेशन, सदस्यताको वितरण स्वभाविक रुपमा हाम्रो सल्लाहबाट हुन्छ । त्यसका लागि हामीले कार्यदलको प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं ।
नीतिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हामी नेपालीको स्वाभिमान, श्रमजिवीको हक अधिकारलाई बलियो बनाउँदै, हाम्रा साधन, स्रोतलाई पूर्ण रुपमा सामाजिक रुपान्तरणको बाटोमा जाने कुरामा कसैको विवाद देखिदैन । समावेशी लोकतन्त्र, न्यायिक समानताका लागि लड्ने हाम्रो जुन अठोट हो त्यसमा पनि प्रश्न छैन् । अब त्यसमा प्रश्न छैन भने के भनेर लड्ने ? अब लड्न मन लाग्नेलाई पनि गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
(एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्ष रावलले आइतबार सिंहदरबारस्थित एकतापक्षधर सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा राखेको धारणाको संपादित अंश ।)
प्रकाशित: २०७८ साउन १० गते २०:०४